Wasiirkii Hore Ee Maaliyadda & Qorsheynta Somalia Oo Xilka Ku Wareejiyey Labo Wasiir Oo Cusub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirkii Hore Ee Maaliyadda & Qorsheynta Somalia Oo Xilka Ku Wareejiyey Labo Wasiir Oo Cusub
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirrkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa xalay labada xi lee uu hayayey ku kala wareejiyey labada wasiir ee cusub.
Munaasibadda oo lagu qabtay Hotelka City Palace ee magalada Muqdisho waxaa ka qeyb-galay Ra’iisul wasaare ku xigeen ahna Wasiirka Diinta Awqaafta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Ridwaan Xersi Maxamed, xildhibaanno wasiirro ka tirsan dowladda iyo dad kale oo lagu casuummay munaasibadda.
Wasiirrkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa xilalka ku wareejiyey wasiirka cudub ee maaaliyadda Xuseen Cabdi Xalane iyo wasiirka qorsheynta Saciid Cabdullaahi.
Wasiirkii hore ee Maaliyadda Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa xusay in 14-kii bilood ee la soo dhaafay uu wadamada caalamka qaarkood uga qey-galay shirar muhiim ah oo intoobada badan looga hadlay Arrimaha Dhaqaalaha, Soomaaliyana ay door muuqda ka qaadatay shirarkaasi.
Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa tilmaamay in markii uu xilkaas qabtay 14 bilood ka hor aysan jirin miisaaniyad rasmi ah iyo mushaar toos ah oo la siiyo shaqaalaha iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
“Xilka aan wareejinayo waxaan qabtay 14 bilood ka hor xili laga baxay KMG muddo lagu jiray ma jirin waqtigaas mushaar joogto ah oo helaan Ciidamadda iyo shaqaalaha dowladda, ma jirin Miisaaniyad rasmi ah oo lagu tashan karo Tayada wasaaradu ku shaqaynayso dhib wayn baa gaartay kaddib 23 sano dagaaladii Sokeeye halkaas ayaan wax ka bilownay runtii ma sahlanayn shaqadu mana ahayn meel wax laga bilaabi Karo waxaan ku guulaysanay Mudadaas 14 ka bilood ah inaan xirno Miisaaniyadii lagu dhaqmay 2012 diyaarinana Miisaaniyadii lagu dhaqmi lahaa sanadkii dhamaaday ee 2013 taasoo guud ahaanteed noo hirgashay” ayuu yiri Maxamuud Xasan Suleymaan.
“Waxaan bilownay inaan soo celino hantidii naga luntay waxaana gacan naga siinaya World Bank, waxaanu heshiisyo horudhac ah la gaarnay Shirkado caalami ah oo gacan naga siinaya tayaynta Miisaaniyada Soomaaliya,” ayuu sidoo kale yiri wasiirkii hore ee maamliyadda iyo Qorshyenta Maxamuud Xasan Suleymaan.
Labada wasiir ee xilalka kala wareegay wasiirka hore ayaa hadalo kooban oo ay goobta ka jeediyeen ku ammaaneen Wasiirkii hore ee Wasaaradahaasi Maxamuud Xasan Sulaymaan (Cawil) mudadii uu xilka Wasaarada hayay howlihii uu qabtay.
Waa wasiirkii ugu horeeyey ee xilka wareejiya, iyadoo raysul wasaare C/weli Sheekh Axmed uu dhawaan 5 maalmod u qabtay in wasiirradii xilka kula wareejiyaan wasiirrada cudub si xukuumaddu shaqo gasho.
Madaxweynaha Somalia: Xasan Daahir Weli Arrimo Muhiim Ayaa Noogu Dhiman